Naya Bikalpa | » बाबुआमाप्रति जिम्मेवार नथ्थी लगाउने कानुन आउँदै बाबुआमाप्रति जिम्मेवार नथ्थी लगाउने कानुन आउँदै – Naya Bikalpa
बाबुआमाप्रति जिम्मेवार नथ्थी लगाउने कानुन आउँदै
प्रकाशित मिती: २०७६ श्रावण १०, ०९: ५२: ०५
काठमाडौं । संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले बाबुआमालाई हेला गर्ने सन्तानमाथि लगाम कस्ने छलफललाई तिव्रता दिएको छ । बाबुआमालाई नपाल्ने र वृद्धाश्रममा पु¥याउने छोराछोरीलाई तल लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने भएको छ । समितिले ‘बाबुआमाप्रति जिम्मेवार नहुने सन्तानलाई कसरी नथ्थी लगाउने भन्ने कानुन निर्माण लागेको बताईन् ।
‘यसका लागि सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरु, महिला बालकालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव लगायतका पदाधिकारीसँग छलफल अघि बढेको छ । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफलका क्रममा आमाबाबुको रेखदेख नगर्ने सन्तानलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो विधेयकलाई बलियो बनाउने बताइन् । कानुनबारेमा अहिलेसम्म ६ जना विज्ञ र संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको जनाएको छ । ‘सन्तानहरुले आफ्ना बुवाआमाप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यबारे समितिले चासो र चिन्ता देखाएको छ ।
हाल मोबाइल मात्रै परिवार बन्दै गएको छ, न न बाउ न आमा न श्रीमान् न श्रीमती न छोराछोरी, हामी मोबाइलमा मात्रै डुब्दै गइरहको छ । यस्तो अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको रेखदेख र सम्मान हुँदैन । त्यसैले यस्तो कानुन बनाउनु परेको जनाएको छ ।’ सहभागी सांसदहरुले छलफलमा सन्तानले आफ्ना बाबुआमाको बैंक खातामा कति प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । कति जम्मा गर्ने भन्ने छलफलमा सहभागी सांसद कृष्ण राईले रकम जम्मा गर्नुपर्ने जोड दिए ।
अर्का सांसद खेम लोहनीले १० करोड कमाउनेले १० प्रतिशत राख्छु भन्यो भने त्यसकोे प्रभाव र जोखिम दुवै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै अर्की सांसद सुजाता परियारले कतिपय जेष्ठ नागरिक आफैँ सक्षम हुने बताउँदै निवृत्तिभरण पाउनेका लागि विकल्प राख्नुपर्ने बताए । अर्की सांसद बीना श्रेष्ठले प्रतिशत तोक्ने कुराले समाजमा डर पैदा हुने विचार थियो ।
सांसद विमला विश्वकर्माले छोराछोरीलाई बाबुआमाका नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउँदा झन् टाढा हुने हुन कि कि भन्ने त्रास पनि आउन सक्ने सुझाव दिइन् । ‘वैदेशिक रोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रकालाई यो कानुनले कसरी समेट्ने ? निश्चित रकम आम्दानी गर्ने प्रतिशत छुट्याउनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने कि ? ।
‘धनीहरुले त परेन छुट्याउदैनन् । यसले मध्यम आयस्तर भएकालाई दबाब दिएजस्तो हुन्छ । त्यता पनि ख्याल गरौँ ।’ त्यस्तै अकी सांसद मिना सुब्बाले जेष्ठ नागरिकको सुरक्षाबारे सोच्ने बेला आएको बताइन् । धनीले पनि बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा पु¥याएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । ‘धनीले पनि आमाबुवालाई वृद्धाश्रममा राखेका छन्, यसबारे कानुनले त्यस्तालाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
२०७६ श्रावण १०, ०९: ५२: ०५